🥇 ▷ IPhone 11 wuxuu kor u qaadayaa isla shaashadda sida Samsung Galaxy S10 ✅
IPhone 11 wuxuu kor u qaadayaa isla shaashadda sida Samsung Galaxy S10
Cidna ma gelineyso gacmahooda madaxooda haddii aan shaaca ka qaadno in Samsung uu yahay qofka soo saari jiray shaashadaha iPhone muddo dheer. Si kastaba ha noqotee, taasi micnaheedu maahan inay yihiin isku shaanbooyin ay shirkadda Kuuriya ku taal meel sare oo xaddidan. Si kastaba ha noqotee, sanadkan, the iPhone 11 shaashadda haa taasi waxay la mid noqon lahayd tii Samsung Galaxy S10.
Shirkadda fadhigeedu yahay Kuuriyada Koonfureed waxay u qaabeeysay nooc ka mid ah guddi hore OLED gaar ahaan aaladda Apple, halka iPhone 11 uu si sahal ah u adeegsan karo isla shaashaddii aan ka aragnay dusha sare ee noocyada sumadda, in kasta oo xilligan ay ka dhaaftay Samsung Galaxy Note 10, si rasmi ah casriga casriga ah oo leh shaashadda ugu fiican suuqa. Iyo, sida ay dhexdhexaadinta tahay TheElec , oo tilmaamaya “ilo ku dhow wax soo saarka” sare ee kala duwan ee Apple, iPhone 11 OLED panel waxaa laga samayn doonaa shey loo yaqaan ‘M9’, kaas oo Samsung ay sidoo kale u isticmaasho Galaxy S10.
Istaraatiijiyadani waxay yareyn doontaa qiimaha wax soo saarka ee iPhone 11 bandhigay maxaa yeelay muhiim uma noqon doonto in la qaabeeyo qalab gaar ah oo loogu talagalay shaashadda Apple). Dhaqdhaqaaqan, ayaa la sheegay, inuu sidoo kale hoos u dhigay liiska alaab-qeybiyeyaasha loo baahan yahay si loo horumariyo shaashadaha iPhone 11.
Maxay tani uga dhigantahay iPhone 11 iyo iPhone 11 Pro cusub (maadaama iPhone 11R uu lahaan doono LCD panel, not OLED)? Badanaa bCalanka Samsung ayaa leh go’aan ka sareeya kan taleefanka Apple, laakiin tani ma aha shey saameyn toos ah ku leh tayada shaashadda.
Si aan u maleyno, oo aan wali garaneyno Apple, waxaan ka wada hadli karnaa badbaadin la taaban karo oo ku saabsan wax soo saarka taleefanka ee saameyn ku yeelan kara Qiimaha iPhone 11. Tan iyo sanadkaan waxay umuuqataa in mobilada mobilada Apple aysan heysan doonin war aad u weyn, kana baxsan kamaradooda seddex-geesoodka ah ama A13 chip, hoos u dhigida qiimaha iibka ee taleefannada 2019 waxay gacan ka geysan kartaa sumcadda inay sii wanaajiso astaamaha iibkeeda.
Si kastaba ha noqotee, ma dooneynno inaan qofna nacasno, oo waa wax aan macquul aheyn in Apple Hoos u dhaco qiimaha kaydadkaaga kaladuwan. Taas awgeed waxaad horay u haysataa iPhone 11R, oo leh qeexitaanno xadidan oo xadidan si aad u qanciso kuwa raadinaya a tufaax raqiis ah. Haatan, waa waqtigii la sugi lahaa ilaa Sebtember 10 si loo xaqiijiyo faahfaahintaan.